Arvind Parthiban's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Arvind Parthiban
Mune ino nguva yedhijitari, iyo yekushambadzira nzvimbo yatama online. Iine vanhu vazhinji online, kunyorera uye kutengesa vatama kubva kune yavo yechinyakare nzvimbo kune yavo nyowani, yedhijitari. Mawebhusaiti anofanirwa kunge ari pamutambo wavo wakanakisa uye vanofunga nezve dhizaini saiti uye ruzivo rwevashandisi. Nekuda kweizvozvo, mawebhusaiti ave akakosha pamari yemakambani. Tichifunga nezvechiitiko ichi, zviri nyore kuona kuti shanduko yehuwandu hwekugadzirisa, kana CRO sekuzivikanwa kwayo, yava